Ama-FAQ | GIS
Ngabe isebenza kanjani isampula ngenkathi kuhlolwa?
I-GIS incoma ukusebenzisa i-ANSI Z1.4 2008 / ANSI / ASQC Z1.4 / BS6001 / DIN 40080 / ISO 2859 / NFX 06-022 (isilinganiso esifanayo sokuhlola isampula sikhonjisiwe ku-ANSI ne-AQL) ukuthola amasampula wokuhlola. Leli zinga nokufana kwalo kuklanyelwe ngokuya ngomqondo wezibalo futhi kumakwe nge-AQL (bheka isigaba esilandelayo). Izinhlelo zamasampula kulezi zindinganiso zibonisa inani lamayunithi wemikhiqizo evela kunkhawulo ngayinye noma i-batch ezohlolisiswa (usayizi wesampula) kanye nokunqunywa kwezindlela zokwemukelwa kokwemukelwa kwenkatho noma i-batch.
Ngokujwayelekile, levelshall level yokuhlola isetshenziswa, uma kungenjalo isendlalelo esithile esinquma ukuhlobana phakathi kosayizi wesampuli nenani noma usayizi we-batch kuzonqunywa yisiphathimandla esiphethe. Ngokusekelwe kuningi noma usayizi we-batch nezinhlamvu zekhodi yokuhlola zinikezwa ukuthi ireferensi yobukhulu besampula edingekayo ngokuya ngalolo luhlelo lusebenza kuphi. Izinhlelo zamasampula ezingashadi futhi ezijwayelekile zisetshenziswa kakhulu. Uma ungenazo izidingo zamasampula ezikhona, i-GIS izokusiza ekunqumeni ukuthi yiluphi uhlelo olusebenza kangcono ngezidingo zakho ezithile.
Amasampula ayahlolwa ngokuchasene nohlelo lokuhlola olunemininingwane yokubukeka, ukusebenza okusebenzayo, ubuqotho bokupakisha, umsebenzi wokwenza umsebenzi, njll. Uma njengamanje awunalo uhlelo lokuhlola, i-GIS ingakusiza.
Izinkinga ezitholakele zihlukaniswa njengezinobucayi, ezinkulu noma ezincane ngokuya ngezinhlelo zokuhlola. Umkhawulo wekhwalithi owamukelekayo (AQL) uchazwa yisiphathimandla esibhekele izinhlobo zezici. Isethi ejwayelekile ye-AQL ichazwe esigabeni se- “What A AQL”. Ukwemukelwa kwengxenye noma i-batch kunqunywa ngemibandela yokuvuma / yokwenqaba ehambisanayo ngohlelo lwe-sampling.
Kodwa-ke, kufanele kuzalwe ukuthi le nqubo ihloselwe ukusetshenziswa ochungechungeni oluqhubekayo lwenkatho, lapho isetshenziswa ngaphandle kwemithetho yokushintshwa, izici ezisebenzayo zohlelo lokuhlola amasampula kumele zihlolwe ngawodwana.
I-AQL, noma Umkhawulo wekhwalithi eyamukelekayo, iyizinga lekhwalithi eliphakathi nenqubo evunyelwe ukubekezelelwa uma uchungechunge oluqhubekayo lwenkatho luthunyelwa ukuze kuthathwe amasampula. I-AQL iyisisekelo sesikuli sesampula. Kulindelwe ukuthi i-lever yekhwalithi yomkhiqizo ibe ngaphansi kwe-AQL. Ngokuvamile kukhona i-AQL emithathu ebekelwa iziphikiso ezibucayi, ezinkulu nezincane ngokwahlukana. Isethi ejwayelekile ye-AQL izoba kanjena:
Uma lincane inani, iziphako ezimbalwa zizokwamukelwa kusampula yomkhiqizo. Lapho ukhetha ama-AQL, kubalulekile ukuthi umuntu aqonde ibhalansi phakathi kokuzibekela phansi kakhulu, futhi enqabe ukuthunyelwa okuningi, futhi azibeka phezulu kakhulu futhi akhulule umkhiqizo ongamukeleki.
Qaphela: Ngaphambilini i-AQL ibiyisifinyezo sekhwalithi yokwemukelwa futhi yashintshwa yaba umkhawulo wekhwalithi yokwamukela kamuva.
Ukulimala ukusuka kwesici sekhwalithi kusuka kuzinga elihlosiwe noma isimo esivela ngobukhulu obanele obangela umkhiqizo ohlobene noma insizakalo ukuthi ingazaliseki izidingo ezijwayelekile ezihlosiwe, noma ezibonakalayo. Ungahlukaniswa ngokuthi:
Okubalulekile - Isici esibucayi sikulelo lokwahlulela futhi okuhlangenwe nakho kukhombisa ukuthi kungenzeka:
a. umphumela wokuthola izimo ezinobungozi noma ezingaphephile zabantu abasebenzisa, abazondlayo, noma ngokuya ngemikhiqizo;
b. vikela ukusebenza komsebenzi wecebo lezinto ezinkulu zokugcina.
Okukhulu - Isiphambeko esikhulu sinye, ngaphandle kokubucayi, okungahle kube nomphumela wehluleki, noma sinciphise ukusebenza kweyunithi lomkhiqizo ngenhloso yayo ebekiwe.
In In Inspection , Kwefektri , Isitsha Sokulayisha Okuphezulu , Ukuqala kokukhiqiza kokukhiqizwa , Kwesithathu , Ukuhlolwa Okugcwele kwe-Intanethi ,